အရည်အ​သွေးနိမ့်တဲ့ CGI Effect ​တွေ​ကြောင့် ​ဝေဖန်ခံ​နေရ​​ပေမဲ့ Rating အမြင့်ဆုံး ရရှိခဲ့တဲ့ "Jirisan"
အရည်အ​သွေးနိမ့်တဲ့ CGI Effect ​တွေ​ကြောင့် ​ဝေဖန်ခံ​နေရ​​ပေမဲ့ Rating အမြင့်ဆုံး ရရှိခဲ့တဲ့ “Jirisan”
K-drama ချစ်သူ​တွေ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ​မျှော်လင့်​စောင့်စား​နေကြတဲ့ “Jirisan” ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ပထမပိုင်းကို ​အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်​နေ့က ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင် မင်းသမီး Jun Ji Hyun က Seo Yi Gang အဖြစ်၊ မင်းသား Joo Ji Hoon က Kang Hyun Jo အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပြီး ၂ ​ယောက်လုံးဟာ ဂျီရီ​တောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်က ​တောင်တက်သမား​တွေဖြစ်ကြပြီး လမ်း​ပျောက်​နေတဲ့ လူ​တွေကို လိုက်လံကယ်တင်ကြရပါတယ်။
ကိုရီးယားအနုပညာ​လောကက နာမည်ကြီး သရုပ်​ဆောင်​တွေ ပါဝင်တာနဲ့အမျှ ပရိသတ်​တွေက ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို အလွန်​မျှော်လင့်ထား​ပေမဲ့ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာတင် မထင်မှတ်ထားတဲ့ အ​ကြောင်းအရင်း​ကြောင့် မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်​တွေဟာ သရုပ်​ဆောင်​တွေကို ချစ်ကြသလို သူတို့ရဲ့ သရုပ်​ဆောင်မှုကိုလည်း သ​ဘောကျကြပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို စိတ်ပျက်​စေခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်း​သော အ​ကြောင်းက​တော့special effect ​တွေ​ကြောင့်ပါ။
မင်းသားမင်းသမီး​တွေဟာ ဒီဇာတ်လမ်းအတွက် တကယ့်​တောင်အမြင့်ကြီး​ပေါ်ကို တက်ပြီး ရိုက်ကူးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ​​ကြောင့် special effect ​တွေကို အစားထိုးသုံးခဲ့ရပြီး အဲ့ဒီ special effect ​တွေကလည်း တခြား​​သော ဇာတ်ကား​တွေထက်စာရင် အ​တော်​လေး အရည်အ​သွေးညံ့ဖျင်း​နေတာကို ​တွေ့ရပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူအများစုက အရည်အ​​သွေးနိမ့်တဲ့ CG ​တွေက ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ​ပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်သွားတယ်လို့ ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။
ကြည့်ရှုသူ​တွေရဲ့ ​ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီ “Jirisan” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Jung Eun Bok က Instagram မှာ သူ့ရဲ့ အမြင်ကို မျ​ှ​ဝေခဲ့တဲ့အခါမှာ​တော့ အ​ခြေအ​နေ​တွေကပိုဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူက “ပထမဆုံးအပိုင်း-(ငါ့ရဲ့ အဆင့်နဲ့​တော့ ​သေချာမသိ​ပေမဲ့) ဒီ​လောက်ဆိုရင် ထုတ်လုပ်​ရေးပြဿနာပဲ။
#Jirisan အ​ကြောင်းက​တော့ ရှိမှာ​ပေါ့/ အဲ့​လောက်များတဲ့ သရုပ်​ဆောင်​တွေကို အရည်အချင်းမရှိသလို မြင်ရ​အောင်လုပ်နိုင်တာကလည်း ​​​မှော်ပညာပဲ။ #တမင်ရည်ရွယ်သလိုဖြစ်သွားရင်​တော့​တောင်းပန်ပါတယ်” ဆိုပြီး ​ရေးသားထားခဲ့တာပါ။ ဒါရိုက်တာ Jung Eun Bok ဟာ “Dream High”, “School 2013”, “Goblin”, “Sweet Home”, “Mr.Sunshine” စတဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေကို ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကြည့်ရှုသူအများစုဟာ “Jirisan” ပထမပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “Eungbok ​ရေ ‘Sweet Home’ ရိုက်တုန်းက ​ကောင်းရဲ့သားနဲ့ အခုမှ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ”၊ “အဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းက အထူးသဖြင့် အဆိုးဆုံးပဲ”၊ ​တောင်တက်အင်္ကျီ​ကြော်ငြာလား”၊ “​တောင်တက်တဲ့အ​ကြောင်းကို ဟာသကားရိုက်ပြထားသလိုပဲ။ တကယ့်​တောင်အစစ်ကို တက်ကြပါလား”၊ “သူတို့ ​နည်းနည်းနိမ့်တဲ့​တောင်ကိုဖြစ်ဖြစ် သွားပြီး ရိုက်သင့်တယ်။ ခု​တော့ ဒါကဘာကြီးလဲ” စသဖြင့် ​ဝေဖန်​ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး တုံ့ပြန်ချက်သိပ်မ​ကောင်း​ပေမဲ့ နာမည်ကြီးသရုပ်​ဆောင်​တွေ ပါဝင်တာနဲ့အမျှ ကြည့်ရှုနှုန်းက​တော့ အရမ်း​မြင့်ခဲ့ပါတယ်။ Nielsen Korea ရဲ့ ​ဒေတာအရဆိုရင် “Jirisan” ပထမပိုင်းဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကြည့်ရှုနှုန်း ၉.၁% ကို ရရှိခဲ့ပြီး အခ​ကြေး​​ငွေမ​ပေးရတဲ့ channel ​တွေအပါအဝင် channel အားလုံးက​နေ ထိုအချိန်အတွင်းပြသတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအားလုံးထဲမှာ ကြည့်ရှုနှုန်းအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် tvN သမိုင်းတစ်​လျှောက် ပထမဆုံးလွှင့်တဲ့အပိုင်းမှာတင် ဒုတိယကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ drama လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမက​​တော့ “Hospital Playlist 2” ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုနှုန်း ၁၀% ကို ရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါတင်မက​သေးပဲ “Jirisan” ဟာ tvN သမိုင်းတစ်​လျှောက် ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ weekend drama ​တွေထဲမှာ ပထမဆုံးအပိုင်းမှာတင် ကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ် စံချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစံချိန်ကို ယခင်က “Mr. Sunshine” က ၈.၉% နဲ့ ရရှိ​ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Source : Koreaboo, Soompi
Photo : tvN
Next Kazz Awards 2021 မှာ အပြိုင်အဆိုင်ဆုရယူခဲ့ကြတဲ့ ရေပန်းစားနေတဲ့ အနုပညာရှင်များ »
Previous « နာမည်ကြီး American ​ဂီတအေဂျင်စီ​တွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ K-Pop အဖွဲ့ (၁၀) ဖွဲ့
အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်​လောက်တဲ့ အ​ခြေအ​နေတွေကို ကြုံ​တွေ့ခဲ့ရဖူးတဲ့ K-Pop Idol များ
အားလပ်ချိန်​လေးမှာ NBA ဘတ်စကတ်​ဘောပွဲကို သွား​ရောက်အား​ပေးခဲ့တဲ့ အားကစားချစ်သူ​လေး Suga
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချစ်ဇာတ်လမ်းမှာ စန္ဒရားတီးတဲ့ကောင်လေး အဖြစ်တွေ့မြင်ရတော့မဲ့ D.O.
“Mor Luang” အပြင် နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းသစ်တစ်ခု ထပ်ရိုက်တော့မယ့် Kimmy Kimberley